समाचार - उत्कृष्ट प्याकेजि design्ग डिजाइन को प्रशंसा
प्याकेजि design्ग डिजाइन आफैं एक सस्तो मार्केटि हो। प्याकेजि design्ग डिजाइन एक ग्राहक को लागी एक भर्खरको मिडिया वाहक हो। ग्राहक अनुभव धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्याकेजि of्ग को डिजाइन मा विचार गर्न को लागी धेरै कारकहरु छन्। हामी न केवल यसको सुन्दरता मा विचार गर्नुपर्छ, तर पनि बिक्री दृश्य र दर्शकहरु लाई विचार गर्नुहोस्। अब हामीले अनलाइन उत्पादन प्याकेजि and्ग र अफलाइन अनुभव, साथ साथै उत्पादन श्रृंखला को निरन्तरता, ब्रान्ड निरंतरता, उत्पादन स्थिति, मार्केटि strategy रणनीति, आदि को बीच केहि सूक्ष्म अंतरहरु लाई विचार गर्नु पर्छ।
केहि ग्राहकहरु लाई रिपोर्ट गरीएको छ कि धेरै डिजाइनरहरु 'प्याकेजि design्ग डिजाइन योजनाहरु धेरै चम्किलो छन्, तर एक पटक उत्पादन आफैंमा लागू हुन्छ, उनीहरु सक्दैनन्। किनभने त्यहाँ अझै प्याकेजि design्ग डिजाइन र ग्राफिक डिजाइन को बीच धेरै भिन्नताहरु छन्। प्याकेजि real प्राप्ति को प्रक्रिया मा, सामाग्री, प्रक्रियाहरु र संयोजन विधिहरु एक राम्रो काम को गठन मा असर पार्छ, जो मुख्य बिन्दु हो जब प्याकेजि design्ग डिजाइन गर्दै ध्यान दिन को लागी। उत्कृष्ट प्याकेजि design्ग डिजाइन को मामला अध्ययन मा एक नजर राखौं!
1. अद्भुत रचनात्मक प्याकेजि design्ग डिजाइन
तथाकथित चापलुसी यी प्याकेजि elements्ग तत्वहरु प्याकेजि of्ग को लागत वृद्धि बिना एक चतुर संयोजन प्राप्त गर्न को लागी हो, वा सरल व्यवस्था को माध्यम बाट, ताकि एक अप्रत्याशित प्रभाव प्राप्त गर्न को लागी। यहाँ प्याकेजि design्ग डिजाइन रचनात्मकता छवि, उत्पादन नाम, प्याकेजि structure्ग संरचना र फारम मा अक्सर छ।
स्क्यानवुड काठ बर्तन को प्याकेजि design्ग डिजाइन धेरै चापलुसी छ। एक साधारण छवि उत्पादन जीवन्त बनाउँछ र मात्र उत्पादन को कार्यात्मक विशेषताहरु को संयोजन, त्यसैले यो एक धेरै सफल प्याकेजि case्ग मामला हो।
2. महान रचनात्मकता को प्याकेजि design्ग डिजाइन
प्याकेजि design्ग डिजाइन को यस प्रकार को रचनात्मक बिन्दु अक्सर एक ठूलो विचार वा एक बलियो नवीन शैली हो। अन्य शब्दहरुमा, एक सफलता सामग्री वा आकार प्राप्त गर्न को लागी, एक उत्कृष्ट उत्पादन प्याकेजि obtain्ग प्राप्त गर्न को लागी।
यदि तपाइँ सावधान हुनुहुन्न भने, तपाइँ सोच्नुहुनेछ कि यो एक बियर प्याकेजि्ग हो, तर वास्तवमा यो एक चामल उत्पादन हो। यो एक पप प्याक मा प्याक गरिएको छ, "दस दिन भात जार", जापान मा सीटीसी कम्पनी को एक उत्पादन भनिन्छ। "दस दिन भात जार" आपात स्थिति को स्थिति मा खाना को रूप मा राखिएको छ। यो एक साधारण पप गर्न सक्नुहुन्छ, 300 ग्राम प्रति गर्न सक्नुहुन्छ। कडा सील प्याकेजि After्ग पछि, यो चावल कीराहरु प्रतिरोधी छ र धुने बाट मुक्त छ। भात भित्र ५ बर्ष सम्म राख्न सकिन्छ! यो उच्च दबाव ग्याँस संग भरिएको छ, जो समुद्री पानी को दीर्घकालीन विसर्जन को सामना गर्न सक्छ र पानी को सतह मा तैरन्छ। एकै समयमा, यो एक निश्चित शक्ति छ, र अवसाद र टूटना बिना बाह्य बल सामना गर्न सक्छ।
3. रचनात्मक प्याकेजिंग ज्यामिति द्वारा ल्याईयो
ज्यामितीय आकार डिजाइन को एक उच्च भावना प्राप्त गर्न को लागी सजिलो छ, र डिजाइन को यो भावना को माध्यम बाट एक आधुनिक र रोचक प्याकेजि design्ग डिजाइन अनुभव प्राप्त गर्न को लागी। यो डिजाइन सोच व्यापक रूप मा धेरै उच्च आधुनिक वास्तुकला डिजाइन सहित डिजाइन को क्षेत्र मा प्रयोग गरीन्छ। अन्तिम विश्लेषण मा, यो सोच को एक प्रकार हो। यो प्याकेजि and्ग र उत्पादनहरु को आकार डिजाइन गर्न डिजाइन सोच को उपयोग गर्दछ, र रंग डिजाइन मिलान को माध्यम बाट, रचनात्मक प्याकेजि products्ग उत्पादनहरु को एक आदर्श भावना प्राप्त।
यो एक अत्यधिक रचनात्मक उच्च सौन्दर्य वाइन प्याकेजि ,्ग, "Koi" जापानी खातिर प्याकेजि design्ग डिजाइन, बुलेट इंक डिजाइन स्टुडियो बाट हो। यो प्याकेजि design्ग डिजाइन दुबै रूप र रंग मिलान मा धेरै सफल छ।
सामान्यतया बोल्दै, प्याकेजि design्ग डिजाइन को पालन गर्न को लागी केहि नियमहरु छन्, तर यो रचनात्मक नियमहरु अनुसार डिजाइन गर्न सकिदैन। प्रत्येक उत्पादन को प्याकेजि the्ग उत्पादन को मूल्य आफैं पालन गर्नुपर्छ, ताकि उत्पादन को मूल्य बिन्दु, जो हामी सामान्यतया बिक्री बिन्दु कल के हो विस्तार गर्न को लागी। केवल प्याकेजि and्ग र रचनात्मकता डिजाइन गरेर, हामी कमोडिटी को मूल मूल्य बढाउन र बिक्री लाई बढावा दिन सक्छौं।
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर 07-2021